Ahoana no ahafahako mamorona rohy mankany amin'ny tranonkalako tahaka ny mpamorona rindrambaiko automatique?
Amin'izao fotoana izao, ny rehetra dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny rohy momba ny fifandraisana amin'ny kalitaon'ny fandrosoana rehetra. Ary tsy ilaina ny milaza fa ny kalitao dia manisy foana ny habetsahatr'io eto - manadino ireo vanim-potoana taloha raha ny antontan'isa goavam-be iray no tena lehibe indrindra, fa tsy ny toetrany marina. Ary etsy ambany dia hilaza aminareo aho mikasika ireo fomba telo mahomby indrindra ahafahana mahazo rohy malaza, na sahy miteny hoe - toy ny mpamorona rindrambaiko miverimberina fotsiny ary tsy misy marimaritra iraisana. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba ahafahanao mahazo backlinks kalitao, na azonay atao ny milaza ny mpamorona rindrambaiko DIY, miaraka amin'ny fifanakalozana fifanakalozana fifandraisana, ary koa ny famoahana lahatsoratra bilaogy vahiny mba hahazoana rohy organika miaraka amin'ny avo PR (laharana) ary DA (fahefana ) ho takalony.
Ity fomba fifandraisana an-tserasera ity (raha tsy izany, ny kodiarana mifandraika) dia ampiasaina betsaka amin'ny fananganana antontam-penitra lehibe maro. Ny fifanakalozan-kevitry ny fifamoivoizana dia fantatra ihany koa ho an'ny generatative automatique backlink automatique. Ity fomba ity matetika dia ahafahana mahazo rohy maro mifanakalo fifandraisana, ohatra eo amin'ny tranokalanao sy ny tranonkala hafa (i. f. , pejy bilaogy izay ataon'ny mpitoraka blaoginao, na angamba ireo tranonkala hafa vonona sy vonona handray anjara amin'ity tetik'asa iombonana ity).
Mazava ho azy, manana tombony maro ny fifanakalozana fifanakalozam-pifandraisana, ankoatra ny mety ho loza mety hitranga amin'ny sazy ara-pitondran-dàlana amin'ny motera fikarohana - ho an'ny lafiny roa amin'ny fifanarahana. Midika izany fa amin'ny toe-javatra rehetra dia tokony ho sahy hiteny ianao farafaharatsiny mba hanandrana izany indray mandeha - fotsiny satria ity no fomba tsara ahazoan'ny olona mandray ny tombontsoa iombonana. Noho izany, ny fametrahana ny tena ifantohana amin'ny fandrosoana azonao, fa tsy ny mety ho fahavoazana mifandraika amin'ny fifanakalozan-kevitry ny fifandraisana, dia soso-kevitra koa ianao haka vahaolana. Midika izany fa ny fananana bilaogy iray na tranonkala iray mba hitsapana ity sori-dàlana ity dia mety ho fanapahan-kevitra tsara ho entina hahatakarana ny fitsipika fampiharana mialoha ny lalao, raha tsy mahazo ny sazy an-kery ankapobeny.
Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny link dia mety ho zavatra mampidi-doza na dia ny manandrana izany aza, sa tsy izany? Avy eo dia azonao atao ny mihevitra ny fanorenana rohy hafa - fanoratana bilaogy vahiny. Rehefa vita tsara, dia azo atao ihany koa ny safidy mety hahatonga anao ho toy ny generic backlink automatique amin'ny alalan'ny anao.Mahatsapa ny tena herin'ny hafatra an-tariby - aza manakimpy ny fotoanao amin'ny fanoratana ny votoaty tena ilaina. Raha vantany vao vita ny fifanarahana mialoha mba havoaka ao amin'ny blaogy malaza na loharano hafa amin'ny aterineto hafa miaraka amin'ny pejy malalaka sy ny fahefana an-toerana, fotoana izao hametrahana ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny alàlan'ny fanoratana.
Raha vantany vao vonona ny lahatsoratra na ny mailaka an-tariby, dia mila manolotra azy io ho an'ny fividianana rindrambaiko voajanahary ho setrin'izany. Amin'ny lafiny iray, ny fanomezan-danja amin'ny fitaovam-pikarohana lehibe (toa an'i Google), io fomba io dia mety ho azo antoka indrindra. Noho izany, tokony hanandrana hahazo lozam-boninahitra goavana ianao miaraka amin'ny hafatra avy amin'ny vahiny. Raha ny marina, ny fampiasana haingana dia haingana amin'ny fampielezana ny fifamoivoizana mivezivezy mivantana mankany amin'ny vohikala, ity fomba ity dia ekena ho marihina amin'ny fanavaozana, na ny matihanina Source .